В Тамбовской области при помощи цифровых технологий выращивают отборный картофель — Картофельная Система
Gobolka Tambov, adoo adeegsanaya tikniyoolajiyada dijitaalka ah, baradhada la soo xulay ayaa la koray
Beeraha casriga ah waxaa lagu magacaabi karaa "dooxooyinka silikon", maadaama ay farsamo ahaan u qalabaysan yihiin. Shirkad kobcaysa warshad u dhaw Tambov ayaa tusaale cad u ah tan.
Belaya Dacha Farming wuxuu ka shaqeynayay dhulka Tambov 4-tii xilli-ciyaareed. Qiyaas ahaan 2700 hektar, soybean, qamadi jiilaalka, galley iyo baradho ayaa lagu beeray. Maalgashiga lagu sameeyay tirakoobka ayaa waqtigan ahaa 23 milyan oo rubles. Diyaaradda loo yaqaan 'drone' oo leh kaameradda ugu sarreysa ee waqtiga dhabta ah waxay gudbisaa macluumaadka ku saabsan horumarinta dhaqamada. Kaydka xogta guud ee dhulka ayaa dib u buuxisa scanner kii ugu dambeeyay.
"Waxa uu sudhan yahay cagaf cagafyada hore, iskuxirka hore, iyo meel masaafad 50 sentimitir ah ka sareysa dusha sare ee garoonka isla markaana baaritaan ku sameynaya garoonka," - ayaa sharxay Artyom Belyaev, oo ah agaasimaha guud ee ganacsiga beeraha.
Sawir-qaade Topsoil wuxuu sameeyaa khariidadda duurka, isaga oo diiradda saaraya cufnaanta ciidda iyo isku dhafka pH. Iyada oo ku saleysan xogta la helay, waxay ula shaqeeyaan dhanka dhulka xaggiisa dambe. Nidaamyada xisaabta, oo ku saleysan macluumaadka la soo uruuriyay, waxay soo saaraan go'aamo diyaarsan oo ku saabsan bilaabidda beero, heerka saxda ah ee waraabka, iyo wixii la mid ah, si loo caawiyo khubaro. Xalal badan oo IT ayaa loo sameeyay si gaar ah baahiyaha shirkada.
Macluumaadka ku saabsan geeska dhulka oo dhan waxaa laga soo aruuriyay codsi wareega, halkaasoo aad ka maamuli karto howlaha beerta oo dhan. Barnaamij waraab oo ay sameeyeen khabiiro ku takhasusay arrimaha maxalliga ah ayaa durba waxaa amar ku bixiyay in baaritaan laga sameeyo shirkad Mareykan ah. Jadwalka taariikhda waraabka ee saxda ah ayaa la soo ururiyay iyada oo la tixgelinayo akhrinta iskaanka, xogta laga helo saldhigyada cimilada iyo dareemayaasha cabbiraya qoyaanka 10 lakabyo ciid ah.
- Tani waa lama huraan si si fiican loogu waraabiyo baradhada, si aan loo culaysin loona helo awood fiican. Sababtoo ah buuxinta ama buux-dhaafka ah, labada xaaladoodba warshadda waxaa lagu arkaa ", - ayuu yidhi Artyom Belyaev, oo ah agaasimaha guud ee shirkada beeraha.
Intooda badan maalgashiga ayaa galay rakibida nidaamka isteerinka iyo booska saxda ah ee gawaarida curyaamiyey. Khaladku waa kaliya 2 iyo badh boqolkiiba kiiloo mitir. Wadada oo dhan iyo raadinta maalinlaha ah waxay saaran yihiin waddo yar oo flash ah. Ka dib markii uu ku xirmo cagaflaha, darawalka cagaflaha waa uu iska daayaa gaariga wuxuuna kaliya daawadaa sida cagafleyda wax walbo kaligiis u sameeyo.
Sababtoo ah xaqiiqada ah in beergooyska xilliga dayrta iyo xilliga gu'ga gu'gu ay ka dhacaan isla waddo isku mid ah oo kumbuyuutar lagu sawiray, baradhada ayaa bislaaday dabacsan, ku dhowaad ciid hawo leh.
In cakiran, nidaamyada beero, abuurka iyo waraabka caqliga leh waxay u oggolaadaan baradhada inay ku koraan heerka ugu sarreeya ee suuragalka ah. Meesha bixitaanka ee digriiga sida xulashada oo culeyskeedu yahay 300 garaam ama ka badan. Goos goosad dhan 55 tan halkii hektar ayaa la filayaa halkan sannadkan. Kadib dalagga xididka wuxuu aadi doonaa warshadda Lipetsk si loogu sameeyo warshado shiilan faransiis, lagu iibiyo silsiladda cunnada ee sida fiican loo yaqaan. Qorshayaasha deg-degga ah ee shirkada ayaa ah bilaabida suuq aad u weyn oo loogu talagalay dalagyada hadhuudhka.
Goynta dalaggu waxay kasii soconaysaa Gobolka Moscow
Qiimaha Basasha ee Russia wuxuu si xawli ah hoos ugu sii dhacayaa
Dhul-gariirka 'Krasnoyarsk Territory', Maalinta Dhirta baradhada ayaa la qabtay
Kuwa ka soo jeeda gobolka Ulyanovsk waxay goosteen in kabadan 30% aagga
Saynisyahanada Australiyaanka ah iyo PepsiCo waxay soo saaraan dufan yar